4 “Wena, ndodana yomuntu, zithathele isitini, usibeke phambi kwakho uqophe kuso umuzi, yebo iJerusalema.+ 2 Uwuvimbezele+ uwakhele udonga lokuvimbezela+ futhi uwakhele igoqo lokuvimbezela+ umise izikaniso ngokumelene nawo ubeke izinqama zokubhodloza nxazonke zawo.+ 3 Kepha wena, zithathele isigazingo, usibeke njengodonga lwensimbi phakathi kwakho nomuzi, umise ubuso bakho bumelane nawo, futhi kumelwe uvinjezelwe, uwuvimbezele. Kuyisibonakaliso endlini ka-Israyeli.+ 4 “Wena, lala ngohlangothi lwesobunxele, ubeke isiphambeko sendlu ka-Israyeli phezu kwalo.+ Uzothwala isiphambeko sayo izinsuku oyobe ulele ngalo. 5 Mina ngizokunika iminyaka yesiphambeko+ sayo ibe yisibalo sezinsuku ezingamakhulu amathathu namashumi ayisishiyagalolunye,+ uthwale isiphambeko sendlu ka-Israyeli. 6 Kumelwe uziqede. “Kumelwe ulale ngohlangothi lwakho lwesokunene okwesibili, futhi kumelwe uthwale isiphambeko sendlu kaJuda izinsuku ezingamashumi amane.+ Usuku lumelele unyaka, usuku lumelele unyaka, yiko engikunike kona.+ 7 Uzomisa ubuso bakho bubheke ukuvinjezelwa kweJerusalema,+ ingalo yakho yembuliwe, futhi kumelwe uprofethe ngokumelene nalo. 8 “Futhi, bheka! ngizokubopha ngezintambo+ ukuze ungaphenduki ukusuka kolunye uhlangothi kuya kolunye, kuze kube yilapho usuziqedile izinsuku zokulivimbezela kwakho. 9 “Kepha wena, thatha ukolweni+ nebhali nobhontshisi+ nodali+ nonyaluthi nesipelite,+ ukufake esitsheni esisodwa uzenzele isinkwa ngakho, uzosidla izinsuku ozolala ngazo ngohlangothi; izinsuku ezingamakhulu amathathu namashumi ayisishiyagalolunye.+ 10 Futhi ukudla ozokudla kuzoba ngesilinganiso—amashekeli angamashumi amabili ngosuku.+ Uzolokhu ukudla. 11 “Amanzi uzowaphuza ngesilinganiso kuphela, ingxenye yesithupha yehini. Uzolokhu uwaphuza. 12 “Uzosidla njengeqebelengwane eliyindilinga lebhali;+ futhi sona, uzosibhaka ngendle+ yabantu phambi kwamehlo abo.” 13 UJehova wabuye wathi: “Abantwana bakwa-Israyeli bayosidla kanje isinkwa sabo singcolile+ phakathi kwezizwe engiyobahlakazela kuzo.”+ 14 Ngathi: “Maye, Nkosi EnguMbusi Jehova! Bheka! Umphefumulo wami awungcolile;+ kusukela ebusheni bami+ angizange ngiyidle ingcuba noma isilwane esidwenguliwe, kuze kube manje, nasemlonyeni wami akuzange kungene inyama engcolile.”+ 15 Ngakho wathi kimi: “Bheka, ngikuniké amalongwe ezinkomo esikhundleni sendle yabantu, kumelwe wenze isinkwa sakho phezu kwawo.” 16 Futhi waqhubeka wathi kimi: “Ndodana yomuntu, bheka ngiphula izinduku okulengiswa kuzo izinkwa ezimise okwesongo,+ eJerusalema, futhi kuyodingeka badle isinkwa ngesilinganiso nangexhala,+ amanzi bawaphuze ngesilinganiso nangokwesaba okukhulu,+ 17 ngenhloso yokuba bantule isinkwa namanzi futhi babukane bemangele futhi babole baphele esiphambekweni sabo.+